XOG: Mas’uuliyiinta & Shaqsiyaadka ku socoto warqadii digniinta ee ka soo baxday DF oo la Ogaaday | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA XOG: Mas’uuliyiinta & Shaqsiyaadka ku socoto warqadii digniinta ee ka soo baxday...
XOG: Mas’uuliyiinta & Shaqsiyaadka ku socoto warqadii digniinta ee ka soo baxday DF oo la Ogaaday
Dabagal iyo Baaritaan aan ku sameynay warqadda digniinta ee ka soo baxday Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa ku ogaatay in shaqsiyaadka iyo mas’uuliyiinta looga digay ficilada dhaawaca ah ku ah Qadiyadaha lama taabkaanka ah ee qaranka Soomaaliya.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa war ay soo saartay waxay ku sheegtay iney soo ifabaxayaan mas’uuliyiin xilal haya iyo kuwo soo heyn jiray ha ahaadaan Federaal ama heer Dowlad Goboleed iyo shaqsiyaad Soomaaliyeed ay ka shaqeynayaan ficilo dhaawacaya qadiyadaha iyo arrimaha aan laga gorgortami karin ee Soomaaliya.
Warar hordhac ah oo aan helnay ayaa sheegaya in Villa Soomaaliya ay ka war heshay shaqsiyaad iyo mas’uuliyiin doonaya iney Kenya ku garabsiiyaan muranka Badda ee kala dhaxeeyo Soomaaliya,kuwaas oo bilihii ugu dambeeyay sal dhig ka dhigtay magaalada Nairobi waligoodna xiriir la lahaa Kenya.
Xogta aan helnay ayaa sheegeysa in farta hadda ay ku godan tahay C/raxmaan C/shakuur Warsame iyo Ra’iisal wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar C/rashiid Cali Sharmarke oo si weyn u dhaliilsan Hannaanka maamulka ee Villa Soomaaliya.
Ma jiraan illo madax bannaan oo si dhab ah u cadeyn kara in siyaasiyiintan arrinta lagu eedeynayo si toos ah ugu lug leeyihiin marka laga soo tago wararka aan ka heleyno Xafiisyada madaxweynaha iyo Ra’iisal wasaaraha Soomaaliya.
Dadka Odorosa siyaasadda ayaa qaba in mas’uuliyiinta hadda xilka haya gaar ahaan maamul Goboleedyada ee loo xaglin karo iney xiriir la leeyihiin Dowladda Kenya loo badinayo inuu yahay Maamulka Jubbaland oo uu madaxweyne ka yahay Axmed Madoobe.
Kenya ayaa xiriir toos ah la leh madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe,maadama ciidamo qeyb ka ah Howlgalka AMISOM oo ka socda Kenya ay joogaan magaalada Kismaayo,kuwaasi oo gacanta ku haaya Dekadda magaaladaasi oo la sheegayo inuu dhaqaalo badan ka soo galo dhoofinta sharcidarada ee dhuxusha.
Sidoo kale, Waxaa jira Xildhibaano la tuhmayo iney gacan saar la leeyihiin Kenya oo kala shaqeynaya in wada hadal laga galo muranka badda ee sii xoogeysanaya,kaasi oo sababay in Kenya ay qaado tallaabooyin dhaawici kara diblomaasiyadda labada dal.